Vaovao - inona ny lamba lamba Twill?
65% Polyester 35% lamba vita amin'ny landy
80% Polyester 20% lamba vita amin'ny landihazo
90% Polyester 10% lamba vita amin'ny landihazo
Asio lamba fanamiana vita
inona ny lamba lamba Twill?
Ny kofehy vita amin'ny lotra sy tenona dia voatsindrona indray mandeha indray mandeha, ary ampiana ireo teboka misy ny loko sy ny tenona mba hanovana ny firafitra vita amin'ny lamba ary nantsoina hoe tenona an-joro.
Ny firafitry ny lamba dia roa kofehy ambony ary 45 ° haingon-dava lamba vita amin'ny lamba, mazava tsara ny làlan-jiro eo anoloana ary tsy hita miharihary ny lamosin'ny tady miloko marevaka. Ny isan'ny isa ary ny karazan-tsofa dia mifanakaiky, ary ny halaliny dia somary avo kokoa noho ny sakan'ny manenona, ary ny tanana dia malefaka noho ny khaki.
Kiraro matevina misy kofehy vita amin'ny landy misy 32 (18 santimetatra na ambany) ho an'ny lamba sy lamba tenona; tsara
Ny lamba twill dia vita amin'ny landona vita amin'ny landy 18 na latsaka (32 santimetatra na mihoatra) ho toy ny lamba sy kitapoka. Fotsy ny twill, miloko mena ary marika, ary matetika ampiasaina ho lamba fitafy, fanatanjahantena, sneakers, lamba amam-borona ary spacers. Ny tady mitsivalana midadasika dia azo ampiasaina ho takelaka ary azo ampiasaina amin'ny lambam-pandriana aorian'ny fanontana. Ny loko sy ny lamba vita amin'ny twill tsara dia elektro-optically na kalendrie ary azo ampiasaina ho toy ny volon-kofehy na klinkety akanjo.
Ny kofehy vita amin'ny lotra sy tenona dia voatsindrona indray mandeha indray mandeha, ary ampiana ireo teboka misy ny loko sy ny tenona mba hanovana ny firafitra vita amin'ny lamba ary nantsoina hoe tenona an-joro. Ny firafitry ny lamba dia roa ...
Boribory lamba rongony Wholesale
Misy lay 2 amin'ity lamba medaly TPU. Ny voalohany dia lamba fototra. Izy io dia lamba tsy lamba. Ny endrika ambany dia sarimihetsika TPU. Izany dia mahatonga ny lamba ho zotram-pahazavana sy tsy ahodin-drano. Ny malefaka sy marefo TPU layer Cou ...
Fampirantiana any Vietnam
Ny 10 aprily lasa teo dia nankany Vietnam izahay mba handray anjara amin'ny fampirantiana, mampiseho ireo vokatra lehibe ao amin'ny orinasa: lamba fonosana, lamba rongony, lamba vita amin'ny akanjo, ary manome mpanjifa fampisehoana amin'ny antsipirihany momba ilay mpiara-miasa ...